Samy ao anatin’ireo dimy voalohany vonjimaika ireo ekipa roa ireo, saingy manatombo kosa eo amin’ny isa ny ekipan’i Taninkatsaka. Eny Carion rahampitso no hanaovana izany fihaonana izany.
Mialoha io anefa dia lalao roa no hanombohana ny andro faha-15. Isan’ireny ny fihaonana eo amin’ny Tana Formation FC sy ny Vesta Team FC. Toy izany ihany koa ny fifanadrinan’ny AS Saint Michel (farany eo amin’ny falaharana vonjimaika) sy ny AS Adema (laharana faharoa).
Hitohy avy hatrany amin’ny alahady ho avy izao ny andiany faha-16 amin’ny fifaninana. Lalao goavana avokoa no hanamarika izany amin’io. Isan’ireny ny fihaonana eo amin’ny Japan Actuel’s sy ny Iarivo Football Club, izay hanoheran’i Auguste Raux ny ekipan’i Ashock Nunkomar. Toy izany ihany koa ny fifanandrinana eo amin’ny AS Adema sy ny Tana Formation FC.